Waa maxay qoddobada ay isku fahmi waayeen ra’iisul wasaare Rooble iyo musharixiinta mucaaradka – Xorriya Online
Midowga musharixiinta ayaa soo bandhigay ilaa far qoddob oo sabab u ahaa fashilka ku dhacay shirkii xalay ra’iisal wasaare Rooble iyo midowga musharixiinta ay ku yeesheen Hotel Decale ee magaalada Muqdisho.
Musharixiinta ayaa hor dhigay ra’iisal wasaaraha ilaa afar qoddob oo waaweyn kuwaa oo sababay in markii dambe shirku burburo, iyaga oo ku eedeeyay ra’iisal wasaaraha in uu awoodi kari waayay go’aan qaadasho sax ah, madaama ay sheegeen in looga dhaganaa dhinaca madaxtooyada.
Qoddobada ay ka dalbadeen midowga musharixiinta ra’iisal wasaaraha ayaa kala ahaa:
2- In ciidamada dowladda laga saaro siyaasadda si loogu kalsoonaado guud ahaanba amaanka dalka gaar ahaan doorashooyinka, lana bedelo ama ugu yaraan shaqada laga joojiyo taliyayaasha ciidamada ee qeybta ka qaatay weerarkii 19-kii Febraayo, kuwa cusubna laga saxiixo in ay siyaasada faraha kala baxaan.
4- In la cadeeyo doorka iyo ka qayb-galka midowga musharixiintq ee Wadahadallada doorashooyinka.
Laakiin ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in loo baahan in la muujiyo sida uu hadalka u dhigay daacadnimo iyo tanaasul, islamarkaana aan la abuurin caqabado hor leh iyo khilaaf aan muhiimad iyo micno weyn lahayn.
Ra’iisal wasaaraha ayaa intaa ku darray in ay ka go’an tahay in la sii wado wadahdalada la xiriira doorashooyinka, iyadoo lagu salaynayo heshiisyadii hore loo gaaray.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah midowga musharixiinta ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu lahaa sababta fashilka shirka isaga oo ku eedeeyay in uu fariimo is daba joog ah u soo dirayay ra’iisal wasaaraha intii lagu guda-jiray shirka.